Madaxweynaha la doortay oo qaabilay wiilkii ku caan baxay “Ar-Farmaajo ii geeya” (Daawo Sawirro) - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha cusub ee Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa galabta ku qaabilay hotelka Jasiira ee magaalada Muqdisho Ninkii ku caan baxay (Farmaajo ii geeya).
Wiillkan oo ku can baxay C/llaahi Max’uud Cusmaan oo loo yaqaano Daanyeerow ayaa maalmahan qabsaday baraha bulshada oo la soo dhigay video laga duubay habeenkii dabaaldega guusha Farmaajo isagoo dhex socda magaalada Jowhar, kuna qeylinaya (AR FARMAAJO II GEEYA).
Waxaa ka shaqeeyay kulankan qaar ka mid ah howlwadeenada ololaha doorashada u qaabilsanaa madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kala sheekeystay wiilkan xaaladiisa, isagoo balan-qaadyo kala duwana u sameeyey, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay la kulanka wiilkan ka mid ahaa shacabkii taageerada u muujiyey.
videoga asalka kkkkkk
C/llaahi Max’uud Cusmaan ayaa waxaa wejigiisa ka muuqatay farxad fara badan xiligii uu la kulmayey madaxweynaha, waxaana uu sheegay inuu aad ula dhacsan sida madaxeynuhu u soo dhoweeyey, waxaana uu sheegay iney tahay maalintii ugu farxada badneyd noloshisa uusana iloobi doonin weligiis.
Madaxweyne Farmaajo oo diidey in ay illaaliyaan ciidamada ajnabiga